Didy 10 an'ny Pinterest ho an'ny orinasa | Martech Zone
Alakamisy, Jona 14, 2012 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Pinterest dia mitohy ho loharanom-pifamoivoizana ho an'i Martech… amin'ny alàlan'ny Marketing Infographics birao. Tsy mandany fotoana be amin'ny Pinterest toy ny ataon'ny hafa aho, saingy azoko tsara ny antony maha-sehatra lehibe azy. Sady mahaliana no jerena ary tsotra ny mijery. Afaka mivezivezy amin'ny fampahalalana iray taonina ianao ao anaty rantsantanana iray!
Ny fanantenana rehefa miditra amina serivisy toa ny Pinterest ny orinasa iray dia samy hafa be noho ny fidiran'ny mpanjifa. Raha tianao hampiasa ny Pinterest ny orinasanao hitarika fifamoivoizana dia mila manamboatra tabilao tsara ianao ary mitazona ny resaka. Ny mpanjifanay, Lisitr'i Angie, manana fanatrehana mahatalanjona ao amin'ny Pinterest… mandefa atiny amin'ny zavatra rehetra avy Fiara kilasika ny Windows sy Doors.
Ny Sort Social Sort sy Mookoo Design dia nanangona an'ity infographic ity, The Didy 10 amin'ny fampiasana Pinterest ho an'ny orinasa, mitarika anao amin'ny fomba fanao tsara indrindra sy ny toro-hevitra amin'ny fametrahana ny Pinterest hiasa amin'ny paikadin'ny varotra media sosialy. Ny sary dia avy amin'ny a lahatsoratra avy amin'ny bilaogin'i Amy Porterfield.
Tags: Pinterestpinterest ho an'ny orinasa
15 Jun 2012 amin'ny 6:49 AM
Nampiasa pinterest aho tao amin'ny tranonkalako ary tsara ny vokany, dia nitsambikina avy tao amin'ny pejy faha-7 ka hatramin'ny faha-5 tao anatin'ny 2 herinandro latsaka.
Ny lakileny dia tsy maintsy ataontsika pinned sy averin'ny olona maro ny tranonkalantsika, izay ny faritra sarotra indrindra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa pinterest dia tsy hanao repin rehefa tsy tian'izy ireo ilay notsindrianay.
Zavatra tsotra no ataoko amin'ny famindrana azy amin'ny fiverr ary nataoko olona pin 75 ny tranokalako, tsy fantatro ny fomba nanaovany azy io tamin'ny fikarohana fotsiny tamin'ny alàlan'ny fanoratana pinterest amin'ny fiverr dia ho hitanao eo amin'ny TOP izany. Mpivarotra maro hafa no manolotra serivisy pinterest amin'ny fiverr fa amin'ny zavatra niainako dia tsy afaka mampitombo ny tranokalako amin'ny SEO izy ireo. Tsy haiko ny antony.
Antony mahatonga ny pinterest ho tsara amin'ny SEO:
1. Mila manisy elatra ny rohin'ny pininao ianao mba hampitomboana ny tranokalanao amin'ny SEO.
2. Raha vantany vao voahidy ny tranokalanay dia manisa ny backlinks.
3. Na dia tsy manohana ny vatofantsika vatofototra aza ny Pinterest (afa-tsy ny rohy url), dia mbola lavorary ihany amin'ny fametrahana ny teny lakilenay amin'ny famaritana.